डचटाउन, सेन्ट लुइस, MO • सबै कुरा तपाईलाई डचटाउनको बारेमा जान्नु आवश्यक छ
डचटाउनमा तपाईंलाई स्वागत छ!
डचटाउन हाम्रो सेन्ट लुइसको दक्षिण छेउमा रहेको हाम्रो छिमेक हो, धेरै इतिहास र परिवर्तन भइरहेको भविष्यको घर। हामी सेन्ट लुइसको सब भन्दा जनसंख्या भएको र घने ठाउँ हो। हामी हाम्रा छिमेकीहरूको विविधतालाई अँगाल्छौं र डचटाउनलाई जाति, आर्थिक स्थिति, धार्मिक पृष्ठभूमि वा कुनै अन्य कारकको पर्वाह नगरी सबैका लागि बाँच्नको लागि राम्रो स्थान बनाउने ठूलो योजनाहरू राख्दछौं। हामी डचटाउन गर्व.
हामी सबैको लागि ठाउँ छ जो धेरै बलको साथ एक बलियो गाउँको हिस्सा हुन चाहान्छौं। हामीलाई भेट्नुहोस् - हामी तपाईंलाई वरिपरि देखाउन मनपराउँछौं। हामीलाई अर्को ढोकामा सार्नुहोस्। यहाँ तपाईंको व्यापार खोल्नुहोस्। हाम्रो छिमेकको भविष्यमा लगानी गर्नुहोस्। डचटाउनमा सबैका लागि केहि छ।
हामीसँग यसको विस्तृत सूची छ छिमेक र शहर संसाधनहरू, थप गाइडहरू नागरिक सेवा ब्यूरो सम्पर्क गर्दै, तपाइँको छिमेकी सुधार विशेषज्ञसँग काम गर्दै, पुलिसमा रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दै, र अधिक।
बुकमार्क dutchtownstl.org/resources एक उपयोगी सन्दर्भ को लागी।
डचटाउनलाई बस्नको लागि उत्तम स्थान बनाउन मद्दत गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ? हाम्रो एक समितिमा सम्मिलित हुनुहोस्:
अधिक खोज्नुहोस् र साइन अप गर्नुहोस् dutchtownstl.org/ कमिटीहरू.
डचटाउनको बारेमा जान्नुहोस्
हाम्रो ईतिहास, हाम्रो मान्छे, हाम्रो वास्तुकला, हाम्रो पार्क, र हाम्रो बारे मा पढ्नुहोस् डचटाउनको बारेमा पृष्ठ।
डचटाउन व्यवसायहरू समर्थन गर्दै
हामी संसाधनहरू जम्मा गर्दैछौं र तपाईं र तपाईंको व्यवसाय लाई सफल बनाउन मद्दतको लागि वाकथ्रु गाईडहरू उत्पादन गर्दैछौं। भ्रमण गर्नुहोस् dutchtownstl.org/ व्यवसाय वा हाम्रो बढ्दो जाँच गर्नुहोस् स्रोतहरूको सूची र हाम्रो गुगलमा प्राप्त गर्नका लागि मार्गदर्शन.
Marquette पार्क मा नयाँ futsal अदालत जाँच गर्नुहोस्! कसरी खेल्ने र सेन्ट लुइस सिटी एससी र अन्य समर्थकहरु संग हाम्रो साझेदारी को बारे मा पढ्न को लागी जान्नुहोस्।
डचटाउनएसएल अनुवाद गर्नुहोस्
DutchtownSTL.org मा सबै समाचार, स्रोतहरू र जानकारी अब स्पेनिश, भियतनामी, अरबी, नेपाली, र अधिकमा उपलब्ध छ! क्लिक गर्नुहोस् अनुवाद पृष्ठको शीर्षमा बटन।
तपाईंको ब्लक व्यवस्थित गर्नुहोस्
एक अर्कालाई चिन्ने र बाहिर हेर्ने छिमेकीहरू बलियो समुदायको मेरुदण्डको गठन गर्दछन्। एक संगठित ब्लक, केहि औपचारिक वा अनौपचारिक रूपमा संगठित, सुरक्षा वृद्धि, सौंदर्यशास्त्र सुधार, नयाँ छिमेकीहरू आकर्षित, र चीजहरू पूरा गर्दछ। तपाईंको ब्लक कसरी व्यवस्थित गर्ने सिक्नुहोस् dutchtownstl.org/blocks.
हामीले पायौ संसाधनहरू तपाईंलाई कुराकानी गर्न, संवाद गर्न, र प्लग इन गर्न मद्दत गर्न संगठित हुनका लागि तपाईका छिमेकीहरूसँग।
साना व्यवसायका लागि अनुदान
के तपाईंको व्यवसाय COVID-19 बाट प्रभावित भएको छ? सेन्ट लुइसको शहरबाट उपलब्ध अनुदानहरूको बारेमा फेला पार्नुहोस् dutchtownstl.org/grants.
डचटाउन मुख्य सडकहरु लाई दान गर्नुहोस्
का लागि दाता बन्नुहोस् डचटाउन मुख्य सडकहरू! प्रत्येक डलर डचटाउन मुख्य सडकहरु लाई हाम्रा बासिन्दाहरु, ब्यापार मालिकहरु, र अन्य हितधारकहरु सबै को लागी एक संपन्न डचटाउन को निर्माण को हाम्रो मिशन तिर मद्दत गर्दछ। एक पटक वा आवर्ती दान गर्नुहोस्.
डचटाउन क्षेत्रको सब भन्दा ठूलो पार्क, हामी निर्माण गर्न काम गरिरहेका छौं मार्क्वेट पार्क हाम्रो छिमेकको केन्द्रबिन्दु। पार्कमा के भइरहेको छ पत्ता लगाउनुहोस् र कसरी तपाईं मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ मार्क्वेट पार्कको सहयोगी पार्क पुन: सक्रिय गर्नुहोस्।
डचटाउनमा सँधै केहि हुन्छ! भ्रमण गर्नुहोस् dutchtownstl.org/cocolate छिमेकको बैठकहरू, स्वयम्सेवा अवसरहरू, वर्गहरू, खुशीका घण्टा, र अन्य धेरै तरिकाहरू पत्ता लगाउन बाहिर आऊ र छिमेकीहरूलाई भेट्नुहोस्.
तपाईको बारेमा जान्नु पर्ने सबै कुरा फेला पार्नुहोस् डचटाउन समुदाय सुधार जिल्ला र तपाइँ कसरी समावेश हुन सक्नुहुन्छ।
डचटाउनएसटीएललाई सम्पर्क गर्नुहोस्
तपाईलाई यहाँ चाहिएको कुरा डचटाउन STL.org मा फेला पार्न सक्नुहुन्न? हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस र हामी मद्दत गर्ने प्रयास गर्नेछौं। तपाईं पनि गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो मेलिंग सूची को लागी साइन अप गर्नुहोस् डचटाउनमा के भइरहेको छ त्यसमा अप टु डेट रहन।
हामीले पायौ डचटाउन मतदाताहरूको लागि जानकारी महत्त्वपूर्ण मितिहरू, उम्मेद्वार जानकारी, र कसरी दर्ता गर्न समावेश सहित dutchtownstl.org/vote.
मा डचटाउन सुन्दर राख्नुहोस् सफा घटनाहरू वरपर भ्रमण गर्नुहोस् dutchtownstl.org/cleanup मद्दत गर्ने तपाइँको अवसर फेला पार्न।
हामी तपाईंको सबै मनपर्ने सोशल मिडिया प्लेटफर्महरूमा छौं! डचटाउन वरपरबाट समाचार, घटनाहरू, फोटो, भिडियो, र अधिकको लागि हामीलाई अनुसरण गर्नुहोस्!
थप समाचार खोज्नुहोस् dutchtownstl.org/news
बाँकी "Dutchtown Main Streets' 2021 Annual Report" पढ्नुहोस्
लुथरन विकास समूहले अर्को चुनौतीपूर्ण कुनाको सामना गर्छ
प्रकाशित मार्च 8th, 2022
डचटाउन-आधारित विकासकर्ता लुथरन विकास समूह सधैं चुनौतीको लागि तयार छ। 2021 को पुच्छर अन्त्यमा, LDG र तिनीहरूको सह-विकासकर्ता समुदाय विकास उठ्नुहोस् को लागि कोष सुरक्षित गरेको घोषणा गरे Marquette Homes परियोजनाडचटाउन र ग्राभोइस पार्कमा 60 गम्भीर रूपमा जीर्ण भवनहरू र खाली ठाउँहरूमा 14 सस्तो अपार्टमेन्टहरू थप्दै। त्यो भन्दा पहिले, यो साझेदारीले छिमेकमा 15 वटा भवनहरू पुनर्जीवित गरेको थियो चिप्पेवा पार्क परियोजना। अब तिनीहरूले 3025 चिप्पेवा स्ट्रीटमा लामो-समस्याग्रस्त सम्पत्तिको अधिग्रहण र योजनाबद्ध पुनर्वासको घोषणा गरेका छन्।
बाँकी पढ्नुहोस् "लुथरन विकास समूहले अर्को चुनौतीपूर्ण कुनाको सामना गर्दछ"
डचटाउन व्यवसायहरूको लागि अनुहार सुधार अनुदान
प्रकाशित मार्च 7th, 2022
डचटाउन मुख्य सडकहरू' डिजाइन समिति र डचटाउन समुदाय सुधार जिल्ला तपाइँ तपाइँको स्टोरफ्रन्टलाई सजाउन मद्दत गर्न चाहनुहुन्छ! भित्र व्यवसायहरू CID पदचिह्न तिनीहरूको सडक-फेसिङ फेसेडहरूमा भौतिक सुधारहरूको लागि $ 500 सम्मको अनुदानको लागि आवेदन दिन सक्छ। हाम्रा व्यवसायहरूको अगाडिको ढोका धेरै आगन्तुकहरूको लागि डचटाउनको प्रवेशद्वार हो, र आकर्षक प्रवेशद्वारले आर्थिक गतिविधिलाई आकर्षित गर्छ र हाम्रो छिमेकको चरित्र देखाउँछ।
"डचटाउन व्यवसायहरूको लागि अनुहार सुधार अनुदान" को बाँकी पढ्नुहोस्
"द डचटाउन लाभांश, भोल्युम एक" को बाँकी पढ्नुहोस्